कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु–वडा अध्यक्ष श्रीस (अन्तरबार्ता)::Online News Portal from State No. 4
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु–वडा अध्यक्ष श्रीस (अन्तरबार्ता)
बाह्रै महिना सवारी चल्ने सडक बनाउने योजना
जिल्लाको काँठेखोला गाँउपालिका वडा नं. ३ स्थित धम्जा विकासको दृष्टिले वडाको तुलनामा कम विकास भएको क्षेत्र हो । भौगोलिक जटिलताका कारण विकास निर्माणका काममा पछि परेको यस क्षेत्रले कमजोर राज्य व्यवस्था प्राणलीको मार पनि खेपीरहेको छ । धम्जाको मुहार फेर्न पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिका हिसाबले वडा अध्यक्षले खेलेको भुमिका परिणाममुखी बन्दै गैरहेको छ । निर्वाचित भएको झण्डै डेढ बर्ष अवधि बिताएका वडा अध्यक्ष यामबहादुर श्रीसले आँफु आएपछि गरेका काम, आगामी योजना र अवसर तथा चुनौतीको बिषयमा सहकर्मी योगेश खड्कासंग गरेको भलाकुसारी ।
वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ?
– अपेक्षा अनुसार सबैका काम गर्न कठिन हुँदा सुरु–सुरुमा गाह्रो नै हुँदो रहेछ । पछि आएर केही सहज महसुस भएको छ । हामीले जनतासँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, त्यस कारणले पनि होला पछिल्लो समय काम गर्न सहज भएको महसुस भएको छ । प्रशासनिक काममा कार्यलय सचिव र कार्यलय सहकर्मीको कारण केही सजकता छ । उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गरिरहनुभएको छ र हामीलाई सहज छ । तर अहिले अध्यक्षको रुपमा काम गर्दा अपेक्षा अनुसारको गर्न कठिन भैरहेको छ । यसको कारण भनेको निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता हुन् । हामीले निर्वाचनका बेला एक खालको प्रतिबद्धता गरेका थियौं । हामी जनताको नजिक छौं, हामीले गरेका प्रतिबद्धता पुरा भए नभएको जनताले मुल्यांकन गरिरहेका छन् । सबै प्रतिबद्धता पुरा गर्न केन्द्रमार्फत नै सम्बोधन हुनुपर्ने रहेछ तर केन्द्रले नगरिँदा अलि जनताको सामु अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ।
वडा अध्यक्ष भएपछि जनताले महशुस गर्ने के–के काम गर्नुभयो ?
– वडाका जनतालाई महसुश हुने गरी गरिएको काममध्ये सुरुमा यहाँका जनतालाई मुख्य स्वास्थ्य चौकीको समस्या थियो । वडाको छेउ भागमा स्वास्थ्यचौकी रहेको हुनाले अरु भेगका जनतालाई त्यहाँ पुग्न समस्या थियो । अहिले स्वास्थ्यचौकीले धम्जाली जनता सबैलाई पुग्न सहज हुने गरी बीच भागमा स्थापना गरेका छौं । साविकको स्वास्थ्यचौकी पनि कायम छ । स्वास्थ्य ईकाइमार्फत हामीले सबैलाई सहज सुविधा दिने प्रयास गरेका छौं । वडामा शिक्षा क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय बनाउनको लागि वडा स्तरीय शिक्षा नीति बनाएका छौं । सोही अनुसार शिक्षाको क्षेत्रमा केही प्रगतिहरु भएका छन् । भौतिक पुर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कयौं कामहरु हामीले गरेका छौं । चाहे खानेपानी होस वा सडक, कृषि र सिंचाई सम्मका काम भएका छन् ।
वडा कार्यालय नियमित नखुल्ने र सचिव पनि नभेटिने समस्या छ भन्छन नि ?
– हाम्रोमा अहिले त्यो समस्या छैन र गुनासो पनि आएको छैन । प्रायःदिन बिहानदेखी साँझसम्म म नै वडा कार्यालयमा रहेको हुन्छु त्यो भएकाले पनि वडा कार्यालय नखुल्ने भन्ने समस्या भएन । कहिलेकाहीं म आईन भनेपनि सचिव र कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालयमा हुनुहुन्छ । नखुल्ने भन्ने समस्या रहँदैन । सचिव ज्यु पनि नियमित उपस्थित हुनुहुन्छ । सबै उहाँका काम उहाँलेनै गर्नुभएको छ । हाम्रोमा कार्यालय नखुल्ने सचिव नहुने भन्ने समस्या छैन् ।
हजुरको क्षेत्रको विकासका लागि गाँउपरिषद÷नगरपरिषदबाट के–के योजनाहरु अगाडि सार्नु भएको छ र हालसम्म के–के गर्नु भयो त ?
– हाम्रो वडाको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा मुख्य रुपमा हामिले ध्यानमा राखेर काम गरेका छौं । यस वडाको मुख्य समस्या भनेकै सडक हो, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं । कच्चि सडक भएपनि धमाधम निर्माण भैरहेका छन् । कतिपय सडकको स्तरोन्नतीको काम भैरहेको छ । खानेपानीको समस्या रहेका क्षेत्रमा हामीले खानेपानी पु¥याउन योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेकै छौं, स्वास्थ्यको कुरा त मैले पहिले पनि जानकारी गराएँ । अपायकमा पर्नेको लागि पायकमा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेर सेवा प्रदान गरिरहेकै छौं । कृषिमा बिभिन्न प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । किसानको आर्थिक क्षमता बृद्धिका लागि हामिले प्रयास थालेका छौं । सडकमा हाम्रो बिशेष ध्यान छ । त्यही अनुरुप सडकको विकासको लागि अगाडि सारिएको योजनामध्ये काँठेखोला गाँउपालिकाहुँदै म्याग्दी पुग्ने सडकलाई भर्खर पनि भनिसकेँ– केन्द्र सरकारले बनाएको योजना हाम्रो वडाको अधिकांश भागहुँदै म्याग्दी जाने भएकाले सोही सडकले केही पक्कि बनाउला । वडाका शाखा सडकको भने अहिलेनै पक्कि बनाउने अवस्था रहेन । बजेटको अवस्था पनि हेर्नुप¥यो । सानो बजेटले धेरै कामहरु गर्नुपर्ने छ । सडकलाई राम्रो बनाउनेमा हाम्रो दुईमत रहेन तर भर्खरै पक्कि गर्ने अवस्था छैन । गाउँपालिकाले योजना बनाएरै सडकको स्तरोन्नतीको काम थालेकाले वडाका केही सडक स्तर बृद्धि हुने छन् । पक्कि बनाउन नसकेपनि बाह्रै महिना सवारी चल्ने बनाउने योजनामा छौं ।
तपाईको कार्यकालमा हजुरको वडालाई कस्तो बनाउने योजना हुनेछ ?
– मेरो कार्यकालमा यस वडालाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँछु । साथै यस वडामा उत्पादन भएको बस्तु बागलुङ बजार लगायत विभिन्न जिल्ला निर्यात गरी यहाँका जनतालाई स्वरोजगारमुखी बनाउने योजना हुनेछ । साथै यस वडाको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सडक सञ्चाजालको राम्रो पूर्वधार खडा गर्ने योजना मेरो छ । साथै यस वडामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल जुन प्रचार–प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । यि सबै क्षेत्रको विकास भएको हुने छ । धम्जामा पनि घुम्न लायकको रमणीय स्थल एवम् पर्यटकीयस्थल छन् भनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवम् मेला महोत्सवमार्फत देशलाई चिनाउने र आर्थिक उन्नती गर्ने योजना छ ।
अन्त्यमा यस पत्रिकामार्फत केही भन्नु छ कि ?
– खुसी लाग्यो तपाईसंग मेरो वडाको समृद्धिको बारेमा कुरा गर्दा । अनि प्रमुख कुरा मेरो वडाको विकासको लागि सकेसम्म कामलाई प्रथामिकता दिने छु र जनतालाई सेवा सुविधा समान रुपमा प्रदान गर्ने छु । मेरो वडामा हुने विकासको योजनाहरु र मेरा विचारहरु सवै जनताका सामु पु¥याउने तपाईको पत्रिकाले दिएको अवसरप्रति पनि मेरो धन्यवाद छ ।
कृषि पढाउन लागिपरेका छौं
दुईबर्षे कार्यकाल पूर्वाधार उन्मुख